Valisoa lehibe - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Fiverenana amin'ny famporisihana ny karama ：
Ny AKF dia mihevitra ny talenta ho harena sarobidy amin'ny orinasa ary ny AKF dia mijery hatrany ny fitomboana sy ny fivoaran'ny mpiasa ao amin'ny orinasa. Mametraka rafi-pamolavolana rafitra fampandrosoana vaovao ho an'ny mpiasa vaovao izay antsoina hoe "tohatra iray, dobo roa". Ny "tohatra iray" dia manondro ireo fantsona roa ho an'ny fampandrosoana ny làlan'ny teknolojia sy ny tsipika fitantanana. "Dobo roa" dia manondro ny "pisinina loharano manam-pahaizana" sy ny "pisinina loharanon-karatra".
Hevitra momba ny onitra:
Ny orinasa dia mampiditra karama antonony sy ambony ambonimbony kokoa noho ny sehatry ny indostrialy mahazatra ho an'ny laharana ankapobeny, ary ny karama avo lenta amin'ny paositra manan-danja, izahay dia mandray ny fiverenana maharitra sy ny fiverenana maharitra ary koa ny fampifangaroana ny fampodiana vola sy ny fiverenana tsy vola. endrika, mba hisarihana feno talenta avo lenta hanokana ny tenany amin'ny iraka sy ny asany amin'ny orinasa.
Raha eo amin'ny fizarana dia ho tratry ny tsy fahombiazana ny elanelam-bola arakaraka ny valin'ny fahombiazana sy ny tombana amin'ny fandraisana anjara mba hiantohana ny fiverenana avo lenta ho an'ireo manana fahombiazana avo. Eo ambanin'ny toe-javatra mitovy amin'izany fampisehoana izany, ny fotoana mety hampidirina amin'ireo mpiasa manana androm-piainana lava, fanoloran-tena ary famantarana ny kolontsaina avo. Mikasika ny fanitsiana karama, ny orinasa dia mandray fandrisihana ara-potoana, ary manasongadina ny fifandraisana roa tonta ao anatin'ny fizotrany, mba hitondrany ny anjara asan'ny "karama" amin'ny famporisihana sy famporisihana ny fahombiazan'ny tena manokana.
Ny AKF dia nikarakara loharanom-paharisihana marobe hanomezana valisoa ny olona sy ny vondrona manana fahombiazana miavaka mba hampirisihana ny firotsahan'ny mpiasa. Ny rafitra mandrisika ny orinasa AKF dia mifantoka amin'ny zava-bita ary tsy miditra amin'ny fitoviana. Araka ny zava-bita, ny mekanisma famporisihana ny orinasa AKF dia mizara roa: fandrisihana avy hatrany ary famintinana sy fanombanana isan-taona.
Drafitra fiantohana: ny mpiasa dia mahazo fiantohana ara-tsosialy ara-dalàna, ary ny orinasa dia manome fiantohana ara-barotra ho an'ny mpiasanay arakaraka ny toetra mampiavaka ny paositra. Fialan-tsasatra karama: fialan-tsasatra andoavam-bola isan-taona Ankoatry ny fialan-tsasatra voafaritry ny fanjakana dia hankafy ny fialan-tsasatra karama isan-taona sy ny fampinonoana ary ny fialan-tsasatra amin'ny Paternity Leave ny mpiasa. Ny lahatsoratra sasany dia mankafy fialan-trano an-trano miaraka amin'izay.
Serivisy fitaterana sakafo: Fanomezana sakafo ho an'ny mpiasanay maimaimpoana.
Dormitory ho an'ny mpiasa: manome efitrano fatoriana ho an'ny mpiasa mila fanampiana ary manome toeram-ponenana mifandraika amin'izany.
Ho an'ireo mpiasa izay mipetraka ivelan'ny orinasa dia hanome fanampiana arahin'antoka trano ho azy ireo .Drafitra momba ny fizahan-tany: ny mpiasa dia mahazo fotoana iray amin'ny fialan-tsasatra fizahan-tany isan-taona.